Kenya oo bilowday Qorshe Cusub Darbigii Xuduuda Ka Dhiseysay – XAMAR POST
By Mohamed Abdi On May 5, 2021
Dowladda Kenya ayaa ku hawlan dhismaha Xaynaab ka kooban Biro shub ah iyo silig Danabaysan oo ay ka dhisayso Xuduudka ay Somalia la wadaagto, iyadoo Mashruucaasi oo la bilaabay sanadkii 2015-kii ay ku kici doonto lacag dhan 3.4 Billion oo Dollar.
Dhowr sano ayey qaadan doontaa si loo dhamaystirto dhismaha Xayndaabkaasi. Qorshahaasi ayaa waxaa ay sheegtay inuu qeyb ka yahay dadaalka Kenya ay kaga gaashaaman doonto weerarada qorsheysan ee ay Dagaalamayaasha Al-shabaab ka fuliyaan gudaha dalkaasi.
Kenya ayaa waxaa kaloo qorshaha ugu jira inay Baro Waaxda Dhismaha Xayndaabkayaa inuu ku nooc noqdo Xayndaabka Israel ka dhistay dhulalka Reer Falastiin ee Daanta Galbeed ee ay Israel haysto oo kale.
Xayndaabka Kenya ka dhisayo 700 KM oo ka mid ah xuduudka Soomaaliya la wadaagto waxaa kaloo la sheegay in laga hirgelin doono Baro dhanka Socdaalka iyo Canshuuraha, iyadoo lagu raki doono Kamerooyinka Qarsoon ee CCTV Cameras.
Mashruucaasi ayaa waxaa kale oo uu ka kooban yahay ugu yaraan 22 Bar Kontoroolka Xuduudka oo ay ka hawlgeli doonaan Ciiddamo aad u qalabaysan, si ay uga hortagaan weerar kasta.
Saraakiisha Kenya waxay kaloo sheegeen in marka la dhamaystiro Dhismahaasi inay Kooxaha Ammaanka lagu ballaarin doono ilaa masaafo gaaraysa 40-KM si ay degdeg uga fal-celiyaan weerarada kaga yimaada xuduudka Somalia.
Wargeyska The Star ee ka soo baxa Nairobi ayaa qoray in dad xog u haya Mashruucaasi sheegeen inay Dowladaha Maraykanka iyo Britain ka taageerayaan Kenya sidii loo dhamaystiri lahaa Xayndaabka laga dhisayo Xuduudka Kenya la wadaagto Somalia.